Xaqiiqooyiin U Gaar Ah Filmka Aamir Khan Bollywoodka Ku Qabsaday Sanadkii Hore Ee Dangal!! – Filimside.net
Xaqiiqooyiin U Gaar Ah Filmka Aamir Khan Bollywoodka Ku Qabsaday Sanadkii Hore Ee Dangal!!
December 28, 2017 Ali Aadan
Taariikhda: December 28, 2017
Waa inaad wax badan ka barataa xaqiiqada filmka Dangal kaaso sanadkii hore 2016 dhamaadkeda la saaray tiyaatarada.
Dangal waxaa hogaamiye ka ah aabaha iskoor sameynta Mr.Perfectionist Aamir Khan halka Fatima Sana Sheikh iyo Sanya Malhotra kula weheliyen.
Dangal waxaa Director ka ah Ritesh Tiwari halka Aamir Khan uu maalgaliye ka yahay waana filmkii ugu weynaa sanadkii 2016 asigoo darajo ahaan noqday All Time Blockbuster.
Hadaba Halkaan Hoose Kaga Bogo Xaqiiqada Filmkaan:
Xaqiiqada 1aad: Muuqaalka ugu horeyo ee Aamir Khan filmkaan duubayey waxuu miisankiisa kadhimay 25 kiilo mudo 20 isbuuc ah ayuuna kudhimay si uu doorka Mahavir Singh Phogat oo 25 jir ah isaga dhigo.
Xaqiiqada 2aad: Filmkaan sheekadisa waxay quseysa oo ay kahadleysa ninka lagu magacaabo Mahavir Singh Phogat kaaso ah macalink tabobarka lagdanka waxuuna lagdanka bari jiray 6 gabdhoo oo uu 4 kamid ah isaga dhalay halka 2 kalena walaalkiis dhaleen, sidaa awged waxuu ugu dambeyn ku guulesana inuu gabdhahas soo saaro lagdanka heer sare ka gaaraan ayagoo India sumcadeda kor u qaadayan.
Xaqiiqada 3aad: Hogaamiyaha filmkaan Aamir Khan iyo Director-ka filmkan Nitesh Tiwari ayaa waxaa la sheegay inee tijaaboyin badan ka qaaden gabdho gaarayaan 3000 oo gabdho si ay kaga run sheegan doorarka Babita Kumari and Geeta Phogat kuwaaso ahaa Mahavir Singh Phogat gabdhihiisa.
Xaqiiqada 4aad: Aamir Khan miisaankisa filmkaan marna wuu kordhinaayey marna wuu yareynaaney waxaana la sheegay in mar uu miisaankisa ku daray 28 Kiilo dhib ayuuna xidigaan ka maray doorka Mahavir Singh Phogat.
Xaqiiqada 5aad: Dangal waxuu noqday filmka aan Hollywood-ka aheyn ee India ah misane lacaga ugu badan China kasoo xareyay abid.
Xaqiiqada 6aad: Fatima Sana Sheikh Dangal kahor waxay kasoo muuqatay aflaam dhowr ah oo ay caruur nimo kujileyso balse film ay atirisho nimo kujileyso Dangal ayee kaga soo caan baxday.
Hase ahaate aflaamti ayadoo yar ay kasoo muuqatay waxaa kamid ahaa filmkii Chaachi 420 kaaso ay kujileysay Kamal Haasan iyo Tabu gabadhooda.
Xaqiiqada 7aad: Rajkummar Rao kaaso Aamir Khan kala soo muuqday filmka Talaash (2012) ayaa door atoore caawiye ah laga siiyay filmkan balse wuu iska diiday xidigaan sababto mashaariic kale ayu xiligaas duubayey.
Xaqiiqada 8aad: Atirishada Model-ka ah ee Mallika Sherawat ayaa sheegtay iney dooneysay ine wax kajisho filmkan balse waxay sheegtay in kooxda filmkaan sameyneysay ay udiiden inee boos kasiyaan.
Xaqiiqada 9aad: Salman Khan ayaa amaan kala duldhacay filmkaan kadib marka uu daawaday waxuuna wareysi ku sheegay in uu filmkaan amaan ka dhanyahay kana wanaagsanyahay filmkiisa Sultan xitaa.
Xaqiiqada 10aad: Gabdhaha filmkaan jilayaan waxaa laga wada xiiray ama laga jaray timahooda si ay kaga run sheegan doorarka loo dhiibay.
Xaqiiqada 11aad: Filmka Dangal waxaa tiyaatarada la saaray 23 Dec 2016 kadib 734 maalmod oo Aamir Khan filmkiisa PK la daawaday micnaha farqi ahaan 734 maalmood ayaa udhaxeysa labada film xiliyada la daawaday.
Xaqiiqada 12aad: Kangana Ranaut iyo Tapsee Pannu ayaa la hadal hayey inee gabdhaha Aamir Khan dhalay filmkaan ku jilayaan balse xan un buu noqday hadalkaas.
Waxaa Aqrisay 895
Qiso cajiib ah oo ka yaabin doonto. January 20, 2019